5 matipi ekuvandudza kuchengetedzeka muCommerce kutenga | ECommerce nhau
Hapana mubvunzo kuti chimwe chezvinhu zvakakosha icho chitoro chepamhepo kana bhizinesi rinofanira kupa kuchengetedzeka mumabasa aro ekutengeserana. Pasina ichi chinhu zvinhu zvishoma kwazvo zvinogona kuwanikwa kuburikidza neichi chiitiko chehunyanzvi. Zvakapesana kwazvo, ndiyo hamvuropu inogona kuva kutsigira bhizinesi kana kunyangwe nechinhu chinosiyanisa chichienzaniswa nemakambani anokwikwidza.
Mune ino mamiriro akapararira, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekudyara nguva nemari mukuvandudza kuchengetedzeka kwechitoro chako chepamhepo. Saka kuti iwe ugone kuita iri zano kubva ikozvino zvichienda mberi, tiri kuenda kukupa iwe akateedzana anobatsira matipi ane chinangwa chikuru chichava chekuvandudza kuchengetedzeka kweCommerce yako.
Kune rimwe divi, zvinosanganisira kugadzirisa zvivakwa iyo yauinayo kare, asi kune imwe kuunza mamwe maratidziro matsva anopa chivimbo chikuru kune ako vatengi kana vashandisi. Kubva pane ino maonero, zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe sarudza pamusoro pezvose kutsanangura zvaunokoshesa panguva yekutsanangudza vekutengesa kana dhijitari chitoro. Nekuti chichava chinhu chinotsigira aya matanho ekuchengetedza atinozokufumura.
1 Chitoro chekutengesa: zvitupa zveshuwa
2 Nzira dzekubhadhara dzakachengeteka
3 Pasina kuchengeta data rakaomarara
4 Sarudza kushandisa 3 D Yakachengeteka
5 Kuteerera nemhando yepamusoro yekuchengetedza
Chitoro chekutengesa: zvitupa zveshuwa
Kupa zvitupa zveSSSL ichave iri danho rinodiwa kuti iwe uite basa iri rinokurumidza kubva zvino zvichienda mberi. Iwe haufanire kukanganwa kuti imwe yedzakanakisa nzira yekuvimbisa kuchengetedzeka kwechitoro chako chepamhepo kushandisa SSL zvitupa. Chitupa ichi chinokutendera kuti ufambe neiyo https protocol, inova yakaenzana nekuchengetedzeka kukuru uye kuti, pamusoro pezvose, ichakupa kuvimba kwakanyanya nevatengi kana vashandisi.
Imwe sosi yaunofanirwa kuendesa mune yako yemagetsi commerce ndeyekupa vashandisi yakachengeteka nzira dzekubhadhara Mupfungwa iyi, vanofanirwa kuburitsa chivimbo chakakura mune zvinotarisirwa nevanhu ava. Saka kuti vave nechivimbiso chakazara chekuti ivo vanozokwanisa kurongedza zvavanotenga nezvizere zvivimbiso zvebudiriro mumabasa avo emari.
Nzira dzekubhadhara dzakachengeteka
Icho chiri pasina mubvunzo chimwe chezvinhu izvo online chitoro kana bhizinesi rinofanira kupa panguva ino. Mune ino kesi, pasina kukanganwa kuti iyo yakajairika nzira yekubhadhara ndeye kiredhiti kana kiredhiti kadhi. Kuita kiredhiti kadhi iwe unogona kushandisa yekubhadhara gedhi, asi pamusoro pezvose iwe unofanirwa kuona kuti ndiyo yakachengeteka sarudzo yeese. Nedonzvo rekutanga rekuona kuti hakuzove nekunyepedzera kana zvimwe zviitwe zviine mari nenzira idzi muripo wedhijitari.
Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kubatsira izvo zvinonzi kubhadhara kwemagetsi. Asi mune ino kesi, pasi pekuchengetedzwa kwakanyanya mukushanda. Kunyanya tichifunga kufungira kuti chikamu chakanaka chevatengi kana vashandisi vanofanirwa kushandisa chishandiso ichi muripo wedhijitari. Uye nekudaro, izvo zvivimbiso zvinofanirwa kuve zvakakura uye uine zvakawanda nzira pazvigunwe zvako. Zvekuti nenzira iyi, ivo vanowanikwa kune kwavo kuitiswa mune zvemagetsi zvekutengeserana, chero yavo mhando uye mavambo.
Izvo zvisina kukosha kukosha kugamuchirwa kwemamwe masystem ekubhadhara anozivikanwa senge imwe nzira uye iyo inogona kuve mhinduro kuzvido zvako maererano nechinhu ichi chine zvitoro kana mabhizimusi epamhepo anazvo. Kubva pane ino maonero, zvinoita sekunge zvakakosha kwazvo kuratidza chokwadi chekuti chakakosha kwazvo funga nzira dzakawanda dzekubhadhara kune mumwe nemumwe mutengi. Zvekuti nenzira iyi, ivo vari muchinzvimbo chekuona yavo yakasarudzika nzira yekubhadhara uye vanogona kuenderera vachiita zvavanotenga pamhepo pasina chero mhando yemipimo maererano nenzira dzekubhadhara dzavanogona kushandisa mumabasa avo ekutengesa.
Pasina kuchengeta data rakaomarara
Icho chimwe chisungo pachikamu chezvitoro zvepamhepo nemabhizinesi kuitira kuti nenzira iyi kuve nekuvimba kwakanyanya murudzi urwu rwemabasa emari. Kuburikidza ne kubviswa kwe data risinganzwisisike senge kadhi rechikwereti nhamba, zuva rekupera, kana kunyangwe iyo CVV kodhi.
Iwe unogona chete chengetedza data iro rakakosha kudzoka uye kudzoreredza. Iyo yakaipa tsika yekuchengetera rese data rakaomarara nekuti inopa iwo mukana wevabibi kuba ruzivo uye kurishandisa kuita purofiti. Izvo zvakakosha kuti uteedzere izvi zvinodiwa nekuti chokwadi chekuti iwe unogona kuramba uine kuvimba kwevatengi vako nevashandisi zvinoenderana navo. Nekuti pasina ivo hapana mubvunzo kuti iwe unenge uine chinyorwa chisina kunaka mukutengesa kwezvinhu zvako kana masevhisi.
Sarudza kushandisa 3 D Yakachengeteka
Zvirokwazvo unogona kushamisika kuti iyi yakasarudzika system mune bhizinesi chengetedzo chii uye ine chii chinosanganisira. Zvakanaka, ingangove protocol inobvumidza iwe kuti uwedzere nhanho yekusimbisa kana uchitenga online. Iko kwauchazofanira kuona kuti zvakare iri system iyo ichakubatsira iwe kubva zvino kuenda kunodzivirira kubiridzira kubhadhara nekadhi rechikwereti pasina kuvapo chaiko kwekadhi.
Zviri nyore kwazvo kushandisa nekuti inowanzo shandiswa nemakadhi akajairwa echikwereti uye ekubhadharisa mune aya maitiro emari. Pamusoro pezvo, zvinongoda kuiswa kwePIN kuitira kuti mafambiro anyatsochengeteka munzira yese uye pasina kuwedzera chero kwechipiri maitiro kune ino mhando yekufambisa kwepamhepo kubhadhara kutenga muchitoro chako kana kuchitoro chepamhepo.
Kuteerera nemhando yepamusoro yekuchengetedza
Uye pakupedzisira, hatigone kukanganwa kuomesa zvakanyanya nechengetedzo inodiwa muzvinhu izvi uye izvo zvinosanganisirwa muData Kudzivirirwa Standard. Kuti uwane kuchengetedzwa kukuru munzira dzakakosha dzekubhadhara, kunyanya idzo dzine chekuita nechikwereti kana makadhi ekubhengi uye kuti zvitoro zvese zvepamhepo zvinofanirwa kutevedzera panguva ino. Iwe unozopa vatengi kutonyanya kuvimba kuti vakwanise kuita zvavanotenga nevimbiso izere uye pasina mutengo wemari. Kuve maitiro anoitwa kubva kunze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 5 nzira dzekuvandudza kuchengetedzeka muCommerce kutenga